Umhla My Pet » Yintoni To Do On Usuku kuqala Zodiac Sign
ngokuthi Nic Gaudette
ukubuyekezwa: Apr. 03 2020 | 5 min ukufunda
imihla zokuqala asoloko luvo-kohambo ngenxa yezizathu ezininzi. Wena Siyavuya ukuba umhla, kunye namathuba oko ukuba bufike, kodwa nexhala yayingena olungileyo. Njengenxalenye yayingena elungileyo kuthetha izicwangciso umhla ukuba omnye umntu uya kunandipha, kodwa njani oko xa andazi kakhulu ngabo kodwa? Ukuba uyazi wabo mqondiso ezulu, zama ukusebenzisa ukuba akuncede ekucwangciseni umhla ogqibeleleyo. Funda:
Ukuba uza ngomhla nomntu Aries, kwenza ukuba izakuba intshukumo-wapakisha. An Aries abunako ukuma ukuhlala phantsi elide kakhulu, kwaye kufuneka enze into ngawo onke amaxesha. Ukwenza umsebenzi onzima ngaphandle, kufana no- okanye nebhayisekile, Wayesenza kubo. Ukuba ufuna ukuhlala endlwini, zama kukhwela amatye yangaphakathi. Qinisekisa ukuba uhambe ukusuka kwenye inxalenye ngomhla olandelayo ngokukhawuleza ngaphandle kokuchitha ixesha elininzi ethunyelwayo okanye kuyo nayiphi na indawo enye okanye baza kuyeka ngokukhawuleza – phambi komhla kunto phezu!
Ukuba uza ngomhla kunye Aquarius, ndiyazi ukuba nguwe umqondiso wokuba olawula izivamvo, ukwenza oko nantoni Siyakubandakanya ezingqondweni zabo isebenza ngcono. Yiya yokutyela intle ukuba unalo ukutya, baye yokungcamla iwayini, kuchitha ukudanisa ubusuku, okanye uye ekonsathini. Apho sukuba usiya, sikulungele ukuchitha imali kuba Aquarius uthanda kubunewunewu. Ekubeni uphawu emhlabeni, ke abanangxaki ukuba ipikniki nice phandle nje akukho eninzi bugs ngeenxa, ngoko ukuba uye kuloo ndlela, phathela amakhandlela நினைவகம் imemori.
Ukuba uza ngomhla kunye Gemini, sibase endaweni ethile cool, nomntu ongathandani, apho kukho abantu abaninzi ehlabathini ukuba abagcine ngokwasengqondweni kwavusa, apho unokuba incoko ebangel. Gcina izihloko ukukhanya umqulu nalo xa Ukutshintsha ngokukhawuleza izifundo. Abayi nayiphi indawo leyo enengxolo okanye baxakeke ngokwenene, nje ngombutho, baze ngolo. Ukuze bathi bathanda izinto wokufuna, kodwa lo mqondiso uzicingela ukuba sele wokufuna ngaphezu okunene ukuba, ngoko musani ukuba kude kakhulu ngaphandle abangayiqhelanga.
Ukuba uza ngomhla ngomhlaza, bazise kwenye ukuba uqhelene kubo, ethile uyazi ukuba ubukhe ukuba phambi. Kufuneka ezibangqongileyo ukuze bazive bekhululekile kwaye ukuvumela ukuba wokuvulela. A yokutyela cwaka kungenzeka ibhetele kuwe, ingakumbi ukuba bakhonze ukutya intuthuzelo kwaye nezingqengqelo endaweni izitulo nzima. Xelela yokutyela ukuba samkhathaza ababini kuni kakhulu ukuze babe nexesha siyiqhele nawe, yaye bobabini uyakwazi ukudibanisa ngokwasemoyeni.
Ukuba uza ngomhla kunye Leo, Nguwo lo umqondiso ukuba uthanda idrama, ngoko zama kumnandi ukuya kubukela imovie okanye yokubonela. Ukuba uye bhanya, ukuqinisekisa ukuba le sanctus zakutshanje ngenkwenkwezi, kwaye ukuba ukuya weqonga, qinisekisa ukuba zokubonisa ishushu phaya ngoku. Bayathanda zintlungu kunye nesihlwele, ngoko apho sukuba usiya khona, kwenza kwindawo eshushu. Ukuba sele flirty super kunye nje nawe, kodwa wonke umntu uthe wadibana, uzive ukhululekile ukubonisa ngekhwele kancinane. Okunene ungathanda ukuba.
Ukuba uza ngomhla kunye Virgo, musani ukwenza nto inkulu kakhulu okanye neekepusi, kwaye musa ubasuse naphi enengxolo okanye baxakeke. Kwenze kwindawo ezolileyo apho uyakwazi ukuva iingcinga zabo. Iba luncedo kakhulu, kwaye bangayifumani ukuba wenze nantoni flamboyant, kungakhathaliseki ukuba ucinga ukuba uthando ngayo. Virgo na umqondiso impilo, ngoko zama yokutyela ezisebenzela ukutya okunempilo, okanye uye lokuzilolonga kunye nabo. Qinisekisa ukuba uphelise usexhaleni zabo ngokukhawuleza, ingakumbi imizimba yabo, ngoko ubahlawule ezinye uncome onyanisekileyo.
Ukuba uza ngomhla kunye Libra, ubasuse ukuba myuziyam zobugcisa, umboniso wobugcisa, okanye abonise ubugcisa. Nguwo lo umqondiso wokuba uyakuxabisa zabo zobugcisa eyona. Unako ukwenza into ubugcisa kunye nabo, ukuya e iglasi zomdongwe okanye a studio glassblowing. Baya kunandipha isenzo udala into nawe. Ungazama ukuya ezintsha, itshatshazi trendiest edolophini, nokuba yinto yokutyela, iklabhu, okanye ipaka. Libras ezifana ingqalelo one-on-enye, ngoko nokuba urhangqwe ngabantu, ugcine amehlo akho kubo.
Ukuba uza ngomhla kunye Virgo, unamathele iindawo ngokukhanyisa ezimnyama. Kwaye bona ababetsaleleke emnyameni, ngoko ke akukho mihla usuku. Banokuba neenciniba ebusuku kakhulu, ngoko khululeka ukuqala umhla emva kwexesha. Bayathanda inzululwazi, ngoko zama imyuziyam inzululwazi, ingakumbi xa uninzi yabantu, yaya kwaye unokuba wedwa ngokupheleleyo nani. Bayathanda kwakhona icala imnyama izifundo ubomi aluvumelekanga, ukwenzela ukuba akunakuthatha olubethelela ndaweni ngesondo, ukufa, okanye igazi Guts, mhlawumbi ndiza nokuthabatheka awayevuya ngayo.
Ukuba uza ngomhla kunye Sagittarius, kuvulelwa ukuba angazinikeli. Lo mqondiso uthanda ukwenza izinto kwi chess, ngoko enisukuba ukucwangcisa mhlawumbi akuyi ngenzeki. Uya kuqala ngo okay, kodwa ke veer kwenye, ngoko umqulu nayo. Sagittarius uthanda ezinye iinkcubeko kunye namazwe, ukuze aye nabo yokutyela olusebenza Cuisine ezingaqhelekanga, kwaye ukuba uyakwazi ukuthatha uhambo, yenze. Nokuba oko ekufutshane uze uhlale kwiiyure ezimbalwa, okanye akhwele moya anqumle kunxweme, bona ukuze ehle. Into ezigqithisileyo kwakhona ukusebenza, ezifana skydiving.
Ukuba uza ngomhla kunye Capricorn, Ukuyenza ibe zemveli unako. Sangokuhlwa kunye imovie a-akanakubanengxaki lo mqondiso. Azikuthandi oludilikayo ngaphandle abangayiqhelanga, kwaye ufuna ukwenza oko sele bekwazi kakuhle. Unamathele koko kuqhelekileyo kubo baze bahlale kude crazy. Ukuba unako ukubasa wesidlo apho ezininzi yimpumelelo, abantu ebalulekileyo iya kuba, loo nto amanqaku nina iingongoma esinzulu. Bayakuthanda hobnob nabantu ukuya esiphezulu.
Ukuba uza ngomhla nomntu Aquarius, Ukuyenza ibe engaqhelekanga njengoko unako. Lo mqondiso uthanda izinto ngendlela engaqhelekanga kwaye yahlukile nantoni bangamkhupha ngokuqhelekileyo, ukuze ukutyhala kufikelela ngaphandle ongaqhelananga njengoko unako. Bona kwakhona obutofotofo umhla iqela, kakhulu kuba bafuna ukuba ngabahlobo nawe kuqala ukuze ndiyazibamba ongathandani. Yiya iindawo ukhathalele-friendly, enkulu ngokutsha, okanye apho abanye wobuntu msebenzi kunye, ezifana ukuchola inkunkuma, ukunceda ikhitshi lesuphu, okanye ukuya kwisidlo yesisa.
Ukuba uza ngomhla kunye Pisces, uyazi ukuba lo mqondiso super uthando, mhlawumbi ngaphezulu kunayo nayiphi na enye, ngoko ke kuyixabisa naziphi izijekulo sappy. Lwesidlo uthando apho uya serenaded kunye ikwatet umtya ihamba kuwe bahambahamba elunxwemeni yinto bangamkhupha umthande. Virgo u yamthanda amanzi, ukuze ungaya yokutyela apho uya kuba izimvo amanzi. Kwakhona bathanda umculo, ngoko zama ikonsathi, nelogwali, okanye uphume esina. Ngokwenene nje sifuna ukuba kufutshane nawe. ukhetho engaqhelekanga? kumyezo. Bathanda izilwanyana.
umphezulu 4 Tips Ufanele Ukwazi Dating
5 Izinto Ukuvuya Sinokukufundiswa Malunga Ubudlelwane
Ukuthandana online: Ukuphepha Zokuba Catfished